Ihe ị ga-ahụ na Amman, isi obodo Jọdan | Akụkọ Njem
Ihe ị ga-ahụ na Amman, isi obodo Jọdan
Mariela Carril | | Jordan, Ihe ị ga-ahụ
Jordan bụ otu n'ime obodo ndị njem nlegharị anya n'akụkụ a nke ụwa na otu n'ime mmekọrịta kacha mma na United States. Ala eze Hashemite nke Jọdan dị n'akụkụ Osimiri Jọdan ma gbadaa Iraq, Saudi Arabia, Israel, Palestine, Oké Osimiri Uhie na Oké Osimiri Nwụrụ Anwụ ka ọ dị na nnukwu ebe maka ndị na-agụ akụkọ ihe mere eme.
Amman bụ isi obodo Jọdan na ọnụ ụzọ ámá mba a nke ọtụtụ ndị maara na ọdịdị nke Queen Rania na magazin Hola! Ọ bụ obodo nwere ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị bi na ya ma na-atụle Middle East ọ na-emesapụ aka ma dịkwa ebube. Ya mere ọ bụ obodo ebe ndị njem mba ọzọ na-enwe ntụsara ahụ. Taa ọ ghọrọ otu n'ime obodo ndị Arab gara, yabụ ebe a ihe niile ị nwere ike ịhụ ma mee na Amman.
2 Amman njem
Amman dị na mpaghara ndagwurugwu ma bido ya n’elu ugwu asaa ka profaịlụ ugwu ndị ahụ ka nwere oke njirimara Nwee obi ụtọ na a ọkara efekarị ihu igwe ya mere, n'oge opupu ihe ubi, ọnọdụ okpomọkụ dị nso na 30 ºC. Oge okpomọkụ na-adịkarị ọkụ ma udu mmiri na-amalite mgbe ọnwa Nọvemba gwụsịrị. Ọ na-abụkarị oyi ma ọ nwere ike ọbụna snow n’ime ebili mmiri oyi.
42% nke ndị bi na Jọdan bi ebe a ọ bụkwa ọnụ ọgụgụ ndị nwere ọtụtụ mbata na ọpụpụ. Enwere ụmụ Arab na ndị Palestaịn na-abịa. Akụkụ buru ibu nke ndị bi na ya bụ Sini Muslim na ọ bụ ya mere enwere ọtụtụ alakụba. E nwekwara Ndị Kraịst, ọ bụ ezie na ha pere mpe. Amman ọ bụ obodo nke ụlọ ndị dị ala, ewezuga etiti nke ewuru ụfọdụ ụlọ elu ọgbara ọhụụ ma nwee ọtụtụ iko. Buildingslọ ebe obibi akarịghị elu ụlọ anọ, ha na-enwekwa mbara ihu na veranda.
Enwere ụlọ ahịa ọdịda anyanwụ, ụlọ ahịa, ụlọ nri na ụlọ mmanya ebe niile tere aka bụ ebe nchekwa.
Amman bụ obodo nwere ọtụtụ narị afọ nke akụkọ ntolite yabụ na ọ nwere akụkọ mgbe ochie, yana Grik, Roman, Ottoman, ọbụnadị ndị Britain, rue mgbe o nwetara nnwere onwe ya Ọ nwere ezigbo ụgbọ njem ọha na eze, emezigharị n'oge na-adịbeghị anya, ya mere ị nwere ike ịga ụgbọ ala ozugbo ị rutere ma ọdụ ụgbọelu mba abụọ ya. Isi n'okporo ụzọ nke obodo ahụ nwere ụzọ asatọ na-agagharị agagharị na agbanyeghị na okporo ụzọ ahụ na-agba aghara, ị ga-enweta ebe obibi gị dị mfe.
Kedu ebe ndị njem nlegharị anya na Amman? Anyị nwere ike ikwu maka ndị kachasị mkpa, nke bụ ndị ị na-agaghị echefu: Citadel, Roman amphitheater, ebe a na-asa ahụ na Turkey, ebe a na-ere ihe na-esi ísì ụtọ, Royal Automobile Museum, Museum of Jordan, Archaeological Museum na Gallery. de Bellas Artes, dịka ọmụmaatụ. Na mgbakwunye na njem ụbọchị ebe ebe mbụ anyị na-aga bụ Petra.
Ebe nchekwa nke Amman Ọ bụ n’elu ugwu kachasị elu n’obodo ahụ, Jebel al-Qala’a, n’ihe dị ka mita 850 n’elu. Ugwu a ebirila kemgbe Ọla Afọ na nnukwu ụlọ gbara gburugburu gburugburu mgbidi nke ewughachi ọtụtụ oge na oge akụkọ ihe mere eme dị iche iche ma ogologo ya dị 1700. N'ime, ihe agaghị agbaghara bụ Obulu Ummayad na Oflọ nsọ nke Hercules. E wuru ụlọ nsọ a n'oge Marcus Aurelius ma ihe foduru n'ime ya na-egosi na ọ bụ ụlọ nsọ mara mma.
Umayyad Obí bụ ebe obibi nke ndị eze bụ ụlọ nke gọvanọ ma bibie ya na ala ọma jijiji na AD 749 ka ọ bụrụ mkpọmkpọ ebe ruo mgbe ebighi ebi. Nnukwu ọnụ ụlọ ndị na-ege ntị nke dị n’ụdị obe na ụlọ elu magburu onwe ya nke ndị ọkà mmụta ihe ochie Spain wughachiri ka dị. Na tank ya na ubube ya ruo na ala na kọlụm nke tụrụ mmiri mmiri na Basilica Byzantine site na narị afọ nke isii na ihe osise ya. Enwere nduzi ọdịyo iji gaa Citadel dum, na JD 15 kwa elekere.
El Amphitheater nke Rome E weghachiri ya. Ọ dị n’akụkụ ugwu ma nwee ikike ruru puku mmadụ isii. Ekwenyere na e wuru ya na narị afọ nke abụọ ma nwee ebe nsọ nke nwere ihe oyiyi Athena nke dị ugbu a na National Archaeological Museum. E weghachiri ya na ngwụsị afọ 50 mana enweghị ihe eji eme ihe mbụ ka ọ ghara ịdị mma. Ìhè nke ụtụtụ kachasị mma maka ịse foto na ọkụ ọdịda anyanwụ, ọ kachasị mma.
Iji zuru ike ntakịrị anyị nwere ike gaa na Bath Turkish. N’ebe a, ụmụnwanyị na-asa ahụ n’otu akụkụ ma ndị ọzọ na-asa ahụ. Enwere Jacuzzis na-ekpo ọkụ ma ọ bụ na-ekpo ọkụ yana saunas oyi. Ahụmahụ ahụ dị mma ma anyị zuru ike nke ukwuu. Ahụmahụ ọzọ dị mma bụ gaa na ụlọ ahịa na-esi ísì ụtọ. Aromas dị ịtụnanya! Nwere ike ịnụ isi, detụ ire ịzụta ngwa nri pụrụ iche iji were gị laa. I nwekwara ike gbalịa ụtọ Kọfị kọfị, họrọ n'etiti Turkish ma ọ bụ Saudi, nụrụ ụtọ nke meze, nri ma ọ bụ tapas (falafel, hummus, tabbouleh, fattoush, oliv ...).
El Royal Museum nke Cargbọ ekpughe akụkọ ihe mere eme nke Jọdan site na 20 ruo ugbu a. Ugbo ala ndị ahụ bụ nke ndị eze gara aga, site na King Abdullah I, onye guzobere alaeze ahụ, gaa n'ihu. Enwere 1952 Lincoln Capri, 810 Cord 1936 na 300 Mercedes Benz 1955SL. Ndị njem nleta na-akwụ JD 3 ma ihe ngosi nka na-emeghe kwa ụbọchị ewezuga Tuesday, site na 10 ruo 7 elekere, ọ bụ ezie na n’oge okpomọkụ, ọnụ ụzọ na-emechi n’elekere 9 nke ụtụtụ.
Maka nke ya Museumlọ ihe nkiri Jordan na-ekpughe akụkọ ọdịbendị nke mba site na ihe nketa ya bara ụba. Ọ dị n'etiti, na Ras al-'Ayn ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị n'oge gara aga, ugbu a na ọdịnihu nke Alaeze a na Middle East ọ bụ ebe na-adọrọ mmasị. Kpachara anya na ọ na-emechi na Mọnde. Na Museumlọ ihe ochie mgbe ochie O nwere ụlọ ngosi ihe ngosi, ụlọ nyocha nchekwa, ọtụtụ veranda na ngosipụta oge na-emetụtakwa ọdịbendị, nketa na akụkọ ntolite nke obodo a.
N'ime ụbọchị abụọ ma ọ bụ atọ ị nwere ike ịgagharị Amman ka ọ na-anụ ụtọ ụtụtụ ya, ehihie na abalị. Enwere ụlọ oriri na ọ andụ andụ na klọb ịgba egwu, enwere ụlọ ahịa na ebe a na-ere mmanya izuike, drinkụọ ihe ọ freshụ freshụ ma chee akụkụ nke obodo Jọdan maka oge. Ma n'ezie, ọ bụrụ na ọ bụ ohere gị zute Petra ị gaghị atụ uche ya: njem nlegharị anya nke ihe dịka elekere 10 wee pụọ n'isi ụtụtụ, n'elekere asaa nke ụtụtụ Ọ dị kilomita iri abụọ na abụọ na ise nke Amman. Gbakọọ ihe dị ka $ 200.
Ọ bụrụ na ịgaghị njem, ịnwere ike iburu bọs ahụ zụta tiketi na Petra Visitor Center dị na Wadi Musa, obodo kacha nso na mkpọmkpọ ebe, kilomita abụọ site na ya. Na-eru mkpọmkpọ ebe na ụkwụ ma ọ bụ na ịnyịnya na-agafe nnukwu nkume mgbidi, ndị Siq. Tiketi ụbọchị na-efu 90 JD ma ọ bụrụ na ịnọ ogologo, otu abalị, ọ na-efu 50 JD. Enwere ebe ị ga-eri na saịtị ma n'ọnụ ụzọ ha na-enye gị maapụ ịchọta ebe dum. O doro anya na ị nwere ike iweta nri nke gị.
Ị chọrọ nọrọ na Petra maka abalị ahụ ma gaa n ’nleta echi ya? Have nwere ebe a mara ụlọikwuu, Ogige Ihe Nleba asaa nke Bedouin na akwa sitere na euro 22 kwa abalị kwa onye ọ bụla, Rocky Mountain Hotel na ụlọ site na 19, 44 euro na nri ụtụtụ Arab gụnyere ma ọ bụ Hotel Al Rashid, na nri ụtụtụ na ntụ oyi na ụlọ si 16 euro, dịka ọmụmaatụ.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, na ihe na-erughị otu izu na Amman ị nwere ezigbo akwụkwọ ozi si Jordan. Aga m etinye ụbọchị ole na ole na spa na ọdụ Osimiri Nwụrụ Anwụ na-abụ abụ lọtrị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Ihe ị ga-ahụ » Ihe ị ga-ahụ na Amman, isi obodo Jọdan
Ememe ezumike na Amalfi Coast na Italytali